Haweenka maxaa u diidey hoggaanka Xisbiyada? (Warbixin) – Maanta Online
Haweenka Soomaaliyeed waa in ka badan kala bar bulshada Soomaaliyeed, waxay kaalin muhiim ah ka qaataan dhammaan qeybaha nolosha ee kala duwan iyagoo marwalba tilmaam u noqday hufnaan, karti iyo horumar. Haddaba maxaa hor istaagan in haweenku kaalin mug leh ka qaataan siyaasadda dalka?
Kulan looga doodayay kaqeyb-galka haweenka ee hoggaanka xisbiyadda siyaasadda oo ay ka soo qeybgaleen, xildhibaanada labada gole ee Baarlamaanka Somaliya, xisbiyadda kumeelgaarka ah , ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyaradda ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 26 Augst 2019 ka dhacey magaalada Muqdisho.
Kulankaan oo uu soo qaban qaabiyay Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka waxaa Furitaankiisa hadalo ka jeediyey xubin ka mid ah Guddiga Saciid Xashi Warsame oo sheegay in xisbiyadda ay saaran yihiin waajibaad culus loogana baahan yahay in ay ka dhabeeyaan hadafka siyaasadeed oo ay xisbiyada u sameesteen.
Gudoomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMDQ) Xaliimo Ismail Ibrahim ayaa sheegtey in xuquuqda qof walba uu Guddiga waajibaad ka saaran yahay, qofkaasi ama lab ha ahaado ama dheddig, loona dhaariyey ilaalinta xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed, ee dastuuriga ah.
Gudoomiye Xaliimo ayaa sidoo kale sheegtey in xisbiyada la diiwaangeliyey ay 54 xisbi yihiin, welina ay socdaan diiwaangelinta xisbiyo cusub, lagana doonaayo xisbiyadda la diiwaangeliyey inay xarun weyn ku yeeshaan magaalada Muqdisho sida sharciga xisbiyadu dhigaayo, si ay u noqdaan xisbiyadu kuwa rasmi ah oo kana baxay kumeelgaarnimada loo baahan yahay inay gudahooda is dhisaan ayna buuxiyaan shuruudaha lagama maarmaanka ah oo ay ugu horreyso sagaal gobol inay xafiisyo ka furtaan.
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa sheegtey in xilliyadii kormeerka xisbiyada uu socdey uu Guddiga la kulmay xisbiyo aan laheyn xarumo ay ku shaqeeyaan Guddiguna uu ka soo saari doonaa go,aanno kama danbeys ah.
Xildhibaanad Farxiyo Muumin oo ka mid ahayd masuuliyiintii ka soo qeybgalay kulanka ayaa sheegtey in haweenka laga doonaayo inay dalka badbaadiyaan, dalkana ay iyagu leeyihiin,kana qeyb qaataan dib u dhiska dalka iyo ka mid noqoshada nidaamka xisbiyada badan leh.
Ugu dambeyn kulanka waxaa fikradahooda ka soo jeediyey masuuliyiinta ka soo qeybgaley kulanka,oo si fur furan uga hadley ujeedada kulanka, islamarkaana faahfaahiyey cabaqadaha hortaagan haweenka leh hammiga ka mid noqoshada nidaamka xisbiyadda badan leh.
Dhammaan mas’uuliyiintii shirka ka hadhashay waxay isku waafaqeen inay jiraan caqabado la xiriira dhaqanka, xaaladda dalka iyo wacyigelin la’aan kuwaasoo ka hortaagan dumarku inay siyaasadda xisbiyada dowr weyn ku yeeshaan xilligan, waxaana laysku waafaqay in la xoojiyo wacyigelinta iyo waxbaridda dumarka ee dhanka siyaasadda, xisbiyaduna ay fiiro gaar ah u yeeshaan ka qeybgalka haweenka ee dhanka siyaasadda.
← Ciidamo xarunta gobolka Banaadir 3 ka tirsan shaqaalaha xaruntaasi (Waa maxay sababta?)
Kenya ‘destroying mobile phone masts in Somalia’ →